I-Apple Pay eSpain ngoku iyafumaneka nge-N26, i-Openbank kunye nabathengi beOrange Cash | Ndisuka mac
I-Apple Pay eSpain ngoku iyafumaneka kubathengi be-N26, Openbank kunye neOrange Cash
Ukwanda kweApple Pay eSpain akuyeki kwaye kuyaqhubeka ngokukhawuleza. Umxholo ophambili ubonakalisa iindaba ebesele zilindelwe ngabathengi abaninzi bala maziko ebhanki, kodwa Ujoyine iOrange Cash, ebingakhange ibhengezwe ngaphambili.
Kule meko abasebenzisi be I-Orange Cash, banokukhetha ukwenza iintlawulo besebenzisa ikhadi leVisa Kwaye ukuyicacisa ngokubanzi, singatsho ukuba sisicelo esibonelelwa ngumsebenzisi waseFrance o-orenji esinokuhlawula ngayo kwi-smartphone yethu, ukuba le yi-iPhone ehambelana nayo, ngoku inkonzo ye-Apple Pay iyafumaneka.
Ezinye iibhanki ezimbini sele zibhengezile ukuba zifikile phambi kokuphela kwalo nyaka, N26, kwaye I-OpenBank namhlanje bajoyine iibhanki esele zihambelana noku Inkqubo yentlawulo ekhuselekileyo ngokusebenzisa iApple Watch, i-iPhone okanye iMac.
Ukwenza iintlawulo kwi-MacYonke into ekufuneka siyenzile kukuthenga kwi-Intanethi ngeSafari kwaye sihlawule ngeMic ID yeTouch kwimeko yeMacBook Pro ngeTouch ID, usebenzisa i-iPhone okanye i-iPad. Ngale nto akuyi kufuneka sigcwalise idatha okanye izinto ezinje kwaye ekuphela "kwengxaki" kule meko kukuba iwebhusayithi kufuneka ihambelane nenkonzo, ukuba ukubamba nje kulula ukugqibezela intlawulo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
Ngoku singasebenzisa iApple Pay ngeBanco Santander, CaixaBank, amakhadi e-Imaginbank, ikhadi leCarrefour Pass, i-boon, iTest Restaurant kwaye ukusukela namhlanje singongeza amakhadi e-Orange Cash, N26 kunye ne-Openbank. Ndiyathemba ukuba iibhanki ezininzi ziya kujoyina ngo-2018 Ngale ndlela bonke abathengi abanqwenela ukusebenzisa iApple Pay eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay eSpain ngoku iyafumaneka kubathengi be-N26, Openbank kunye neOrange Cash
U-Yasmina Macías Pérez sitsho
Phendula Yasmina Macías Pérez
Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu iza kwiiapps zeMacOS